नेपाली मनहरू nepalimanharu.com (शिव प्रकाश ): डाक्टर साप्को मुटुनेरीको सिस्नेरी
शिव प्रकाश फूल किन फूल्छ भनेर कविकै शब्दमा
कविले उत्तर खोजे झैं म कविता किन लेख्छु भनेर आफैंसंग उनले अर्को उत्तर पनि खोजेका
छन् । यसमा उनले धेरै उत्तरहरु निकालेता पनि आफूमा कवित्वको कमि भएकोले
कविता लेख्ने गरेको निष्कर्षलाइ उनले स्वीकारेका छन् । कवि शिव गौतम यस्तै
दार्शनिक भावानुभूति बोकेर कविता लेख्ने गर्छन् । अनि मुटुनेरीको सिस्नेरी
कविता संग्रह लिएर सुटुक्क पाठक समक्ष आउछन् । कथा, लेख, निबन्ध तथा खोज-अनुसन्धानका विषयमा समय
समयमा कलम चलाउने
उनी साहित्य भूमिको मूलतः कविता विधामा नै नाच्न खेल्न रमाउँछन् । पेशाले तथ्याङ्क र साङ्ख्यिकीका
डाक्टर (पीएचडी) भएता पनि भावले उनी एक कुशल कवि देखिन्छन् । स्वेदेशमा
त्रिविविको प्राध्यापनदेखि लिएर विदेशका बिभिन्न प्रतिष्ठित विश्व विद्यालयहरुमा
अध्ययन र अध्यापन गर्दे गराउँदै हाल अमेरिकाको विख्यात हार्भर्ट विश्वविद्यालयको स्वास्थ्य
विज्ञान स्कूल बोष्टनमा
प्राध्यापनरत कवि गौतमले आफू घरदेशबाट टाढाटाढा धेरै टाढा परदेशमा रहदाँ पनि स्वदेशलाई कहिल्यै बिसे्रका
छैनन् र बिस्रन पनि सक्दैनन् । परदेशमा रहँदा पनि उनले मातृभूमिलाई
बोकेका छन् । राष्ट्रियतालाई हृदयमा राखेका छन् । नेपालीपनले अविचलित ओतप्रोत
छन् र सगरमाथालाई अझै चुल्याएका छन् । यी भावनाहरुलाई नेपालै बोकेर कवितामा
कवि यसरी ब्यक्त गर्छन् । जहाँ म टेक्छु त्यो नेपाल बन्छ म जुन हिउचुली हेर्छु त्यो हिमाल
हुन्छ म परशेमा भए पनि मेरो देश पर छैन जहाँ म जान्छु नेपाल बोकेरै जान्छु । भोजपुर जिल्लाको सिस्नेरीमा जन्मिएका
कवि आफ्नो जन्मथलोसंगको अटुट सम्बन्ध सधैं अटुट रहने स्पष्ट छनक दिदैं मुटुनेरीको
सिस्नेरीमा उनी मातृत्व र भातृत्वप्रतिको स्नेहलाई फेरि यसरी ब्यक्त गर्छन् - म जतिसुकै बुढो भए पनि सिस्नेरी ! म भित्रको सम्झना सधैं तन्नेरी तिमीसंगको दूरी जतिसुकै बढेपिन सिस्नेरी ! तिमी सधैं मेरो मुटुनेरी । संग्रहमा कवि गौतमले समाजका आवेश-परिवेश, विकृति-विसंगति र वास्तविकताहरु
साथै ब्यक्तिका वैयत्तिक आवेगहरुलाई
संयोजित ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । उनका कविताहरुमा प्रयुक्त अनुप्राशले भरपुर
मिठास भरेको छ भने भाव र भङ्गी अनुसार कविको भावना बगेको छ । मूलतः ग्रामीण
नेपाली महिलाहरुको दुःख, पीडा, अभाव र कुण्ठाका कथा-ब्यथाहरुलाई पनि उनले
आफ्ना कविताहरुका उनेका छन् । हाँसो र रोदन, नेपालै बोकेर र एउटा सम्बन्ध संग्रह भित्रका
पर्छन् भने राममान र एउटा विरङ्गनाको जीवन कथा यथार्थपरक कविता
पर्छन् । जसले धेरैको हृदयलाई
छुन सक्छ । दिलमायाको पिरतिमा देश विथोलिएको भए पनि देशप्रति आफ्नो प्रेम अटुट रहेको
स्पष्ट धारण कविले ब्यक्त गरेका छन् । शिष्ट भाषा र सुक्ष्म ब्यङ्ग्यद्वारा
हाम्रो समाजलाई सचेत गराउँदै संग्रहमा ठाउँठाउँमा ठट्टा रमाइलोलाई पनि संयोजन गरेर
अझ मीठासपूर्ण बनाउन कवि शिव गौतम खप्पिस देखिन्छन् । मान्छे मान्छेबीच हुने घात-प्रतिघात, अविश्वास, कलहकचिङ्गल र मान्छे भएर
पनि देखाइने कुमान्छेको दुष्प्रवृतिलाई
कविताका माध्यमबाट उनले उदाङ्गो पारेका छन् । यिनका अलावा उनको कविता संग्रह
पढ्दा कवि प्रकृतिसंग अति प्रभावित भएको भान पनि हुन्छ । प्रकृतिको अनुपम् उपहार फूलसंग
कवि धेरै नजिक छन्
। कवितामा उनी फूलसंग खेलेका छन् । हाँसेका छन् । रमेका छन् । अनि
ढुङ्गाभित्र पनि मन हुन्छ भन्दै
पहराको छातीमा फूल फूलाउँदै कवि गौतम कवितामा यसरी वहन्छन् - पहरा भनेर मात्रै कहाँ हुन्छ र उसको छातिमा पनि कतै एउटा कोमल भाग हुन सक्छ जहाँ गएर एउटा फूल फूलेको हुन सक्छ । यस संग्रहमा भावुकता कताकता कवि
र कविताको विषेशता नै देखिन्छ । हुन त भावुकता बिना कविताको सिर्जना पनि हुन
सक्दैन । कविको छवि पनि त्यसैमा झल्किएको हुन्छ । यसले कवि गौतमलाई पूर्णरुपले
प्रभावित गरेको पाइन्छ । अनि भाषाको सरलता संग्रहको अर्को बिषेशता मानिएको
छ । सपनाका रंगहरु पछि
साझा प्रकाशनद्वारा प्रकाशित ५१
कविताहरुको संग्रह मुटुनेरीको सिस्नेरी यथार्थमा पठनीय छ संग्रहनीय छ । यो संग्रहले
पनि नेपाली साहित्य जगतमा ठूलो गुन लागाएको कुरामा दुईमत पक्कै छैन भन्दा
सायद फरक नपर्ला । कविको साहित्य यात्रा निरन्तर रहिरहोस् । Friday,